သံခမောက်မပါဘဲစက်ဘီးစီးတာကိုဖမ်းမိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ - သံခမောက်
အဓိက > သံခမောက် > စက်ဘီးစီးသူကိုသံခမောက်မစီးဘဲမောင်းနှင်ခြင်းသည်တရားမဝင်ပါ
မဖြစ်မနေချိုးဖောက်သောလူများစက်ဘီး ဦး ထုပ်ဥပဒေများNSWဗစ်တိုးရီးယားရှိနေစဉ်, $ 344 ဒဏ်ငွေရင်ဆိုင်နေရသည်ယင်း$ 207 ။ အနိမ့်ဆုံးဒဏ်ငွေသည်မြောက်ပိုင်းနယ်မြေတွင်ဒေါ်လာ ၂၅ ဖြစ်သည်။ 'ငါတို့'နှင့်ရတယ်နီးပါး $6သန်းသောဒဏ်ငွေများ၏မျက်နှာတန်ဖိုးများကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌ရှိသည်ဒီတစ်ခုပြစ်မှုအတွက်ထုတ်ပေးခဲ့ '' ဒေါက်တာ Quilter ကဆိုသည်။
သင်၏စက်ဘီးပေါ်တွင်သင်လုပ်သင့်သောအရာများအကြောင်းဆောင်းပါးများစွာရေးသားခဲ့သည်။ သို့သော်ဘုရားသခင်အတွက်သင်သေချာမပြုလုပ်သင့်သောအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့များစွာမပြုလုပ်ခဲ့ပါ၊ သင်တစ်ယောက်တည်း (သို့) ၀ င်ရောက်နေလျှင်ပင်ယင်းကိုမလုပ်ပါနှင့် ဒေါသထွက်နေတဲ့ငှက်ကလေးကစားနေစဉ်ဖုန်းကိုမရေးတော့ဘဲရပ်တန့်သွားတဲ့အုပ်စုတစ်စု။ အိုကေ၊ သူမဒုတိယအကြိမ်ဘယ်မှာလေ့လာရမလဲ၊ အုပ်စုတစ်စုကိုကားမောင်းနေသည့်အခါဖုန်းပေါ်၌ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းပြောဆိုခြင်း၊ ဖုန်းမကိုင်မိစေရန်ကြိုးစားခြင်း၊ မင်းအနားကလူနဲ့စကားစမြည်ပြောပြီးလှပတဲ့ဝန်းကျင်မှာပျော်မွေ့ပါ။ မင်းရဲ့ဖုန်းကိုခေါ်ပါ။ ငါကငါ့စက်ဘီးမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါစကားပြောနေတုန်းပဲ။ မင်းယုံကြည်စိတ်ချမှုမရှိသေးဘူးဆိုရင်မင်းရဲ့ဖုန်းကမင်းလည်းဒဏ်ငွေကောင်းကောင်းရနိုင်တယ်။ အချို့သောနိုင်ငံများရှိစက်ဘီးဖြင့်သင်၏ဖုန်းကိုအသုံးပြုရန်အတွက်ရဲများကသင့်အားစက်ဘီးဖြင့်စက်ဘီးဖြင့်ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်မလိုပါ။ သူသည်သင်၏ဓာတ်ပုံဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်သင်၏အကူအညီလိုနေသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ငါ့အဆို့ရှင်များနောက်တစ်ဆင့်တက်သည်၊ သင်စက်ဘီးဖြင့်အရင်မစီးပါနှင့်လား သင်ခေါင်းကိုလှည့်ပါလိမ့်မည်၊ ဒုတိယအနေဖြင့်သင်၏ချပ်ဝတ်တန်ဆာများကိုဖျက်ဆီးပစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်မှားယွင်းနေသည်။ တတိယလူတိုင်းက Chris Froome ဖြစ်သည်ဟုလူတိုင်းထင်ကြလိမ့်မည်။ သင်ကားရပ်ပြီးကားများမောင်းသည့်အခါကျွန်ုပ်သည်အမြဲတမ်းနေရာကျလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးသင်လုပ်ချင်တာကတော့တံခါးဖွင့်ခြင်းနှင့်လမ်းပေါ်သို့တစ်စုံတစ်ယောက်ထွက်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ အဲဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတုံ့ပြန်ဖို့လုံလောက်တဲ့အချိန်ပေးဖို့ပါ။ ဒါကြောင့်ငါပြောခဲ့သလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုနေရာနှင့်အချိန်အလုံအလောက်ပေးပါ။ အခုတော့ဒါကငါ့အတွက်တော်တော်များများဖြစ်သွားတယ်။ မင်းဟာမင်းစီးနင်းနေတဲ့အချိန်မှာမောင်းနှင်နေတဲ့အမျိုးသမီးမောင်းသူနဲ့မိန်းမနောက်မောင်းသူယောက်ျားပျံလာတဲ့အချိန်မှာအခြားအမျိုးသမီးမောင်းသူတော်တော်များများကအလုပ်များနေကြတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ မင်းက puffins ထဲမှာ snorting လုပ်ပြီးမိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာမင်းသူတို့ကိုပြန်မီလိုက်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါအခုလွင့်လာပြီ၊ ယောက်ျားမောင်းသူတွေအားလုံးဒီလိုလုပ်နေကြတာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်တချို့ယောက်ျားတွေကငါတို့ကိုမိန်းမတွေမှီခိုဖို့နဲနဲကြိုးစားပြီးမင်းကိုထိုးဖောက်တာကိုငါမုန်းတယ်။
မိန်းမတွေကမင်းထက်ပိုမြန်တယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကတော်တော်လေးမြန်တယ်၊ နောက်လာမယ့်မိန်းကလေးကအခုမရှိတော့ဘူး၊ သင်ဟာအုပ်စုတစ်စုမှာ၊ တခြားသူတွေနဲ့ကားမောင်းပြီးနမ်းဖို့လိုတယ်၊ သို့မဟုတ်သင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ၊ သို့မှသာသင်သည်သူတို့ကိုခေါက်ဖြင့်မခေါက်ပါနှင့်။ လမ်းအလယ်တွင်လူများလမ်းလျှောက်နေသောလူများနှင့်သင်မြို့အလယ်တွင်ရောက်နေသည့်အခါသူတို့ကိုလမ်းပေါ်တွင်မသိမ်းဆည်းပါနှင့်။ စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ သင်ကားမောင်းနေစဉ်တွင်အစားအစာသို့မဟုတ်သောက်စရာကုန်သွားလျှင်သင့်အားသင်၏ပုလင်းများကိုချောင်းသို့မဟုတ်ရေကန်သို့မဟုတ်အရက်ဆိုင်သို့မဟုတ် ashop ကိုစောင့်ရန်အတွက် ၁၀၀ တန်သင့်သောရေအိုင်တွင်မထည့်သင့်ဟုဆိုလိုသည်၊ လာမယ့်သီတင်းပတ်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဂရုစိုက်ပါ၊ ဒါကြောင့်ညစ်ပတ်တဲ့ရေကိုနောက်ကွယ်မှာထားခဲ့ပါ၊ ဟေး၊ ဘယ်ရေပေါ်မှာမဆိုငါချွေတာဖို့အချိန်ရှိတယ်။ ငါတကယ်စင်ကြယ်တယ်လို့ငါဆိုလိုတာ၊ သိုးကအဲဒီချောင်းထဲမှာသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်မင်းကိုရပ်တန့်လိုက်တာလားဆိုတာငါမသိဘူး။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်တယ်။ မြန်မြန်သွားပါ။ သင်တစ်ယောက်တည်းမောင်းမယ်ဆိုရင်ဒါဟာမလွယ်ကူပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်အုပ်စုလိုက်အခြေအနေတစ်ခုမှာသင်ဟာဖြောင့်မတ်စွာနေဖို့အခက်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်နေရောင်ညှပ်များ (သို့) သင့်နိုင်ငံသားတွေဟာသင့်ကိုဝေးဝေးရွေ့သွားဖို့ခက်ခဲစေနိုင် သင်၏စက်ဘီးဂီယာနှင့်စျေးဝယ်ရန်အတွက်လမ်းဆုံမထွက်ခွာမီမှာရိုးရှင်းသောဂီယာမျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် mom, pop ဆိုင်သို့သွားသည်။ အဆင်ပြေပါသည်။ သို့သော်လက်ဝတ်ရတနာများသို့မဟုတ်အ ၀ တ်အစားများကို ၀ ယ်ယူခြင်းသည်သင်၏ချွေးစေးများကိုတန်ဖိုးမထားပါ။ စက်ဘီးစီးခြင်းလမ်းဆုံလမ်းခွများကိုကျော်သွားခြင်း၊ အနီရောင်မီးခုန်ခြင်းကိုကျော်လွှားခြင်းနှင့် zebra ဖြတ်ကူးချိန်တွင်စိတ်ရှည်ရှည်ဖြင့်စောင့်ဆိုင်းခြင်းစသည့်အသွားအလာစည်းမျဉ်းများကိုချိုးဖောက်နိုင်သည်။ ဤသည်ကားသင်၏စက်ဘီးပေါ်၌ထွက်နေစဉ်သင်မလုပ်သင့်သောအရာများစာရင်းဖြစ်သည်။
ယခုသင်၌သင်နှင့်သင်မျှဝေလိုသည့်သင့်တွင်ရှိသည့်အရာတစ်ခုခုရှိပါကအောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်များကဏ္inတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။ သင်ဤဆောင်းပါးကိုနှစ်သက်လျှင် ကျေးဇူးပြု၍ မျှဝေပါ။ စက်ဘီးပေါ်ကမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကြီးမားတဲ့လက်မတက်အောင်လုပ်ပါ၊ မလုပ်ပါနဲ့
ငါဝတ်ဆင်ရန်လိုပါသလားသံခမောက်ငါသံသရာ? အတင်းအကျပ်သောဥပဒေမရှိပါစက်ဘီးစီးဝတ်ဆင်ရန်မည်သည့်အသက်အရွယ်၏သံခမောက်။ သို့သျောလညျးကသိသာအန္တရာယ်ရှိသည်သံသရာတစ်ခု, နှင့်အဝေးပြေး Code ကိုအားလုံးအကြံပြုထားသည်စက်ဘီးစီးလုံခြုံပြီးကောင်းမွန်စွာဝတ်ဆင်ပါသံခမောက်မသက်ဆိုင်ဥပဒေများမိန့်၏။
စက်ဘီးစီးသူများအားသံခမောက်များကိုဖိအားပေးသင့်သည်ဆိုပါက၎င်းသည်ရန်ပွဲတစ်ခုဖြစ်စေရန်အာမခံချက်ပေးသည်။ လူတိုင်းတွင်ထင်မြင်ချက်ရှိသည်။ ပြproblemနာမှာ၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်သက်သေအထောက်အထားများအပေါ်အခြေမခံပါ။ ကျွန်ုပ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်စတင်ပါရစေ။ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်တစ်စီးဝတ်လေ့ရှိပြီးကျွန်ုပ်စက်ဘီးကိုလဲကျသောအခါနှင့်ကျွန်ုပ်၏သံခမောက်များသည်စနစ်တကျတပ်ဆင်ထားပြီးအရှိန်နည်းသောအရာတစ်ခုခုပေါ်တွင်စီးနင်းနေစဉ်။ အထောက်အထားများအရ၎င်းသည်သံခမောက်များတပ်ဆင်ထားသည့်စက်ဘီးစီးသူများကို ၀ တ်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်အားအထောက်အကူပြုနိုင်ကြောင်းပြသသည်။ ၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့သည်အမေရိကန်အနှံ့စက်ဘီးစီး။ ကျွန်ုပ်သည်ခေါင်းတစ်ထည်မိုင် ၇၀ တွင်ငါ့ကိုရိုက်နှက်သောထရပ်ကားတစ်စီးဖြင့်မှန်ကိုပစ်လိုက်သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆိုင်ကယ်ပေါ်ကလမ်းပေါ်မှာရောက်နေပေမယ့်ကံကောင်းထောက်မစွာပဲငါဟာသံခမောက်ကိုဝတ်ထားတယ်။ အကယ်၍သာ ငါဟာသေလောက်အောင်အချိုးအစားနည်းနည်းလေးနဲ့သေလိမ့်မယ်၊ ဒါကြောင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရတဲ့သံခမောက်တွေကလူတွေကိုကယ်တင်နိုင်တယ်။ အခုတော့နားထောင်ကြရအောင် အခြားဆရာဝန်တစ် ဦး မှလူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်သာမကပြည်သူအားလုံးအတွက်ကျန်းမာသည်ဟုရှုမြင်သည် - စက်ဘီးခမောက်များကိုဝတ်ဆင်ခြင်းသည်လူတို့အတွက်စွဲဆောင်မှုနည်းပါးပြီးသင်သံသရာအကြိမ်အရေအတွက်ကိုလျော့နည်းစေသည့်အလွန်ကောင်းသောသက်သေအထောက်အထားရှိသည်။ စက်ဘီးစီးခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများသည်ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်များနှင့်များစွာဝေးကွာသည်။ ထို့အပြင်စက်ဘီးစီးခြင်းသည်လူသန်းပေါင်း ၃၀ တိုင်းအတွက်ယူကေတွင်လူတစ် ဦး သေဆုံးမှုနှုန်းရှိသည်ဟုလူတို့ထင်ထားသကဲ့သို့အန္တရာယ်မကင်းပါ။ နှစ်စဉ်စက်ဘီးစီးသူတစ်ရာခန့်သေသည်။ ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်လူပေါင်း ၈၅,၀၀၀ ကျော်သည်မလှုပ်မရှားနေထိုင်သောဘဝမှဖြစ်ပေါ်သောရောဂါများကြောင့်နှလုံးရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါနှင့်ကင်ဆာကဲ့သို့သောရောဂါများကိုခံစားခဲ့ရပြီးထိုရောဂါများမှာအတိအကျဖြစ်သည်။
စက်ဘီးစီးခြင်းကိုတားဆီးကာကွယ်ခြင်းတွင်အလွန်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ Play မှပါ ၀ င်နိုင်ခြင်းစက်ဘီးစီးခြင်းကိုဤနည်းကိုတိုက်ဖျက်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ စက်ဘီးစီးခြင်းသည်နေ့စဉ်ဘဝ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်လူအများပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လေ့ရှိသောကြောင့်အားကစားရုံသို့သွားစရာမလိုခြင်းဖြစ်သည်။ စတိုးဆိုင်သို့လမ်းလျှောက်ရာတွင်သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်နိုင်ခြင်းစသည်တို့ကိုစက်ဘီးစီးခြင်းဖြင့်ပိုမိုလုံခြုံမှုရှိစေကာမူစက်ဘီးခမောက်များအသုံးပြုခြင်းကိုဖိအားပေးခြင်းသည်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကုန်ကျစရိတ်ကိုပိုမိုမြင့်တက်စေပြီးစက်ဘီးစီးသူများသည်ထင်ရသည့်အရာတစ်ခုခုကိုသံခမောက်လုံးတပ်ဆင်သည့်အခါအခြားအဖြစ်အပျက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များက၎င်းသည်အန္တရာယ်ကိုလျော်ကြေးပေးခြင်းဟုခေါ်သည်။ အခြေခံအားဖြင့်၊ သင်ကာကွယ်မှုပိုရတဲ့အခါ၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့မှာဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာလူတွေရှိတယ်၊ သူတို့မှာသူတို့ရဲ့သံခမောက်လုံးကိုခြေရာခံတဲ့ကိရိယာရှိနေချိန်မှာငါတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ့်အကြောင်းကြည့်တော့မယ်။ ပြီးတော့လောင်းကစားလုပ်ငန်းတွေမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချရာမှာအမျိုးမျိုးလုပ်ခဲ့တယ်၊ သံခမောက်သည်လောင်းကစားခြင်းလုပ်ငန်းတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ပိုမိုအန္တရာယ်များသည့်အပြင်ပိုမိုမြင့်မားသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုပြသသည်။ ထို့ကြောင့်စာရေးသူများသည် ပို၍ ကြောက်စရာကောင်းလာသည်နှင့်အမျှအခြားလမ်းအသုံးပြုသူများသည်စက်ဘီးစီးသူများနှင့် ထပ်မံ၍ အန္တရာယ်ပိုမိုကြုံတွေ့ရဖွယ်ရှိသည်။ ဒီစက်ဘီးကိုတစ်မီတာနဲ့တစ်ခါတစ်ရံအလုပ်များနေတဲ့အချိန်တစ်ခါတလေသူကတစ်ခါတစ်ရံသံခမောက်လုံး ၀ တ်ပြီး ၀ တ်နေစဉ်ပျမ်းမျှယာဉ်အသွားအလာပိုမိုနီးကပ်လာတယ်၊ ဒါကြောင့်သံခမောက်လုံးနှင့်သင်အလွယ်တကူသွားနိုင်သောဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့်ရှင်းလင်းချက်နှစ်ခုရှိသည်။ အတွေ့အကြုံများစွာရှိသူဖြစ်သည်။ အခြားဖြစ်နိုင်ချေရှိသောရှင်းလင်းချက်များအားလုံးအတွက်ယာဉ်မောင်းများ၏တုံ့ပြန်မှုမှာ Glamor သည်သူအားကာကွယ်ထားကြောင်း၊
ဒီတော့နိုင်ငံတွေကစက်ဘီးခမောက်ကိုမဖြစ်မနေလုပ်တဲ့အခါဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ။ သူတို့နိဂုံးချုပ်တစ်ခုသံခမောက်လုံးသူတို့ဝါယာကြိုးနှင့်အတူဤသို့ပြုသက်သေအထောက်အထားမရှိ။ စက်ဘီးလုံခြုံရေးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများသည်ခမောက်ပေါ်တွင်အခြေပြုသည့်အခါစက်ဘီးကျွမ်းကျင်သူများစွာသည်အလွန်စိတ်ပျက်ကြသည်။ ပျားအုံသည်သင်ကြိုးတစ်ချောင်းစီတိုင်းစက်ဘီးခမောက်ကိုသာဝတ်ဆင်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ သင်၏ကလေးများသည်သင်၏သံခမောက်လုံးသည်ထိုစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုဂုဏ်ယူစွာဝတ်ဆင်လေ့ရှိသည်။ ChrisBoardman ယခင်အိုလံပစ်ချန်ပီယံဟောင်းစက်ဘီးစီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူသံခမောက်ကွဲပြissueနာဖြစ်လာသည်။ ငါအကူအညီမဲ့တယ်လို့ခံစားရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလူတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်လေ့ရှိတယ်ငါမတတ်နိုင်ဘူးငါစက်ဘီးစီးတာကသူတော်စင်ပဲ။ လှုပ်ရှားမှုပဲ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကအန္တရာယ်ရှိတယ်ဒတ်ခ်ျလူမျိုးတွေဟာနှစ်ပေါင်း ၄၀ ကြာလုံခြုံစိတ်ချရသောစက်ဘီးလမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်၊ ဒါပေမယ့်နယ်သာလန်စက်ဘီးစီးတာဟာသင်သိတဲ့ယူကေရဲ့အဓိကလမ်းမကြီးထက်လေးဆလောက်လုံခြုံစိတ်ချရပါတယ်။ verh ker ပါ ၀ င်သူအားလုံးကိုစိတ်ဝင်စားမှုသည်မျှော်လင့်နေလျှင်အမြန်လမ်းကိုဖယ်ရှားပါ
အရွယ်ရောက်သူအသက် ၁၈ နှစ်နှင့်အထက်မလုပ်ပါနှင့်ဝတ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်စက်ဘီးခမောက်၏ပြည်နယ်အတွက်မည်သည့်အချိန်တွင်မကယ်လီဖိုးနီးယား။ သို့သော်တစ် ဦး ဝတ်ထားသံခမောက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလုံခြုံမှုအတွက်အသက်အရွယ်မရွေးအရေးပါသည်။
Woman: BRAD၊ ဒီခန်းမထဲမှာမီးလင်းနေသလား။ မဟုတ်ပါ။ ဘာကြောင့်ပတ်ပတ်လည်ကိုကြည့်ရတာလဲ။ သင့် ဦး ခေါင်းအထက်တွင်ကြည့်နိုင်သလား။
ဤမီးသည် ON လား။ ဟုတ်သည်၊ လူကောင်း၊ ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဒီဂျစ်တယ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ခန့်နှင့်ယနေ့မောင်းနှင်နေသည့်ကြောင့်ယနေ့သံခမောက်လုံးမ ၀ တ်ပါ။ သင့်မျက်လုံးများ၌ချွေးထွက်များ
ကျွန်ုပ်သည်သံခမောက်တစ်လုံးရှိသည့်အချိန်တွင်ထိုအချိန်တွင်ငါခံစားခဲ့ရသည်၊ ဒီမေးခွန်းအတွက်အဖြေ BRADLEY STONE“ ဟုတ်သည်” ဖြစ်သည်။ အဆိုတော် - အကယ်၍ သင်၏ခေါင်းသည်အာကာသသို့မဟုတ်ကြမ်းပြင်ကိုတက်လျှင်သင့် ဦး နှောက်သည်ရှေ့သို့ရွေ့သွားလိမ့်မည်။
ဦး ခေါင်းခွံ၏အတွင်းပိုင်းရှိအရိုးများကိုပုံပျက်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည် NERVOUS FIBRI ကိုပိုမိုခိုင်ခံ့စေလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် NERVOUS FIBRE ကိုခွဲဝေလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဦး နှောက်ဆဲလ်တစ်လုံးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပါက၎င်းကိုအစားထိုးစရာမလိုပါ၊ ၎င်းသည်ထာဝရပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။ မတော်တဆမှုတစ်ခုကဲ့သို့မကြာခဏပိုကောင်းလာသည်မဟုတ်။
မိန်းမ - လှိုင်းတစ်ခုပေးလိုက်လား။ အဆိုတော် - သင်တစ်ခုခုပျောက်ဆုံးပြီလား။ သင်သည်သင်၏ကြွက်သားများကိုထိန်းချုပ်သောသင်၏စနစ်ပျက်စီးယိုယွင်းမှုကြောင့်သင်၏ဥာဏ်ရည်အချို့ကိုဆုံးရှုံးဖူးသည်။ အမူအကျင့်ပြောင်းလဲခြင်း၊ အခြားလူများနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အခက်အခဲများရှိခြင်း၊ ကောင်းသောလူမှုရေးအရဆက်နွယ်မှုများနှင့်ဆက်လုပ်လိုသလား။ ငါအခုနိုးနေချင်တယ်၊ သင်သာမာန်အားဖြင့်သင်လုပ်သောပထမဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းကဘာလဲ။ ညာဘက်။
အိုကေ။ မင်းမေးစေ့ကိုစမ်းကြည့်ပါ။ ပြီးတော့ခင်ဗျားရဲ့နှာခေါင်းကိုထိဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါ။ အိုကေ
AND သင်ဤ 10 ကြိမ်လုပ်ချင်တယ်။ MOM: သုံးနှစ်ကြာတဲ့ဂျိမ်းစ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးသူပြန်လာတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ ဂျိမ်း - ငါလိုချင်တယ်။ ..
James: Woman: ဒီတစ်ခုထဲကတစ်ခုကိုလိုချင်လား OH သင်တစ်ခုခုဖြစ်ချင်, ထွက်သွား? ကောင်းပြီ။ တစ် ဦး တည်းသာမိနစ်ပိုင်းယူဤအရာ၏စုံတွဲမှုတ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျနော်တို့လုပ်နေပြီယနေ့။ Nice ယောဘ။
မိခင် - လမ်းပေါ်မှာသူမောင်းနှင်တယ်။ ဒါပေမဲ့သူဟာသံခမောက်လုံးမ ၀ တ်ဘူး။ သူကထိန်းချုပ်မှုကိုအလဟ BA ဆုံးရှုံးပြီး BAUM ကိုနှိပ်ပါ။ သူ KOMA ၌ရှစ်လကြာခဲ့သည်။ ငါသတ္တုတွင်းသူအရမ်းနာမကျန်းဖြစ်ခဲ့
ငါသူ့ကိုတွေ့တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာသူလုပ်နိုင်မလားမသိဘူး။ သူဟာကိုယ်အလေးချိန်အရမ်းကျတဲ့အတွက် SKELETON တစ်ခုတည်းပဲရှိခဲ့တယ်။ သူ့ကိုအလေးတစ်အိတ်၌ချိန်တွယ်ရန်ရှိသည်။ အိုင်တီသည်သူစုစည်းထားသောစခန်း၏ပုံသဏ္Lာန်ပင်ဖြစ်သည်။
ဒီကနေ့ငါ့ရဲ့သားလေးကိုတွေ့ဖို့ငါကြောက်နေတယ်။ ဒီကိစ္စကိုထပ်ခါထပ်ခါလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားသလား။ သင့်ဝန်ကိုရှေ့သို့ယူဆောင်လာပါ။
တွန်းအားပေးနေစဉ်သင်ကြည့်ရှုနိုင်သလား။ အမေကောင်း - သူ့ပန်းတိုင်ကသူ့ဘာသာစကားပြန်ပေးဖို့ပါ။ သူ၏ရည်မှန်းချက်သည်ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းနိုင်ရမည်ဖြစ်သော်လည်းအလွန်နှေးကွေးပြီးဘယ်တော့မျှထိုနည်းတူဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီနည်းကိုဘယ်တော့မှလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်ပြိုလဲလျှင်ငါမှန်ပါတယ်၊ သင်၏လက်ကိုဖြောင့်ဖြောင့်ထုတ်ချင်သလား OK? သင်၏တံတောင်ဆစ်ကိုတိုးချဲ့ပါ။ သင်ပိုမိုခိုင်မာလာ။ မိခင် - မတော်တဆမှုမတိုင်မီက၊
သူသည်အလှအပဖြတ်တောက်ခဲ့သည်။ သူကတကယ်ပဲပန်းချီဆရာတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်။ WOMAN:
သင်တွေ့လိမ့်မည်အတိုင်းမှန်သောထောင့်။ မိခင် - သူ့မှာတစ်ချိန်ကသူထိန်းချုပ်မထားဘူး။ နောက်ဆုံးအပြီးသတ်ကြည့်သည့်အခါကလေးငယ်လေးကဲ့သို့သူလုပ်သောအရာများစွာရှိသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကာလအတွင်းလုပ်ဆောင်သောလူကြီးတစ် ဦး နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်သင်သိထားသည်။
အိုင်တီကူးလိုက် ငါနောက်ထပ်သားတစ်ယောက်ရှိသေးတယ်သူကအရမ်းကောင်းတဲ့အပေါင်းအဖော်တွေဖြစ်လို့သူတို့ဟာဒဏ်ရာရခဲ့ကြပြီးမိသားစုတစ်ခုလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ ဂျိမ်း - ငါလိုချင်တယ်
မိခင်။ ။ ခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးချစ်ရသူတစ် ဦး ကိုကြည့်ရှုဖို့မိသားစုအတွက်အလွန်ခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုပျက်စီးသွားတယ်။ ဂျိမ်း: အမေ။
သင်စားသောအစားအစာ၊ နှေးနှေးမှေးမှိန်သွားသောအစားအစာများကိုအမြန်ဆုံးသွားရန်အချိန်တန်ပြီ၊ အကယ်၍ သူသည်ထွက်ခွာသွားမည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့မသိပါ။ သူ၏အနံ့သည်သူ၏အနံ့ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ငါဘယ်တော့မှသူမဖြစ်မီသူဖြစ်လိမ့်မည်ရှေ့ဆက်ကြည့်ဖို့ဘယ်တော့မှမ
ငါပဲသူတူညီသောပုဂ္ဂိုလ်နောက်ကျောငါသူသည်ယခုအချိန်တွင်တိုးတက်သည်နှင့်သူ GET နိုင်သလောက်တတ်နိုင်သမျှငါယာကုပ်နှင့်အတူသွားရပြီ။ သူ့အတွက်အနာဂတ်ရှိရင်ငါမသိဘူး။ ကျွန်တော့်ကိုနောက်ထပ်ထိခိုက်စေတဲ့အရာသူ့အသက်တာမှာသူလုပ်ချင်တဲ့အခြားအရာတစ်ခုထက်ပိုပြီးလုပ်လို့မရဘူး၊ ဒီနည်းကိုရှောင်ရှားနိုင်မယ်။
ဆိုးဆိုးဝါးဝါးသူ့ခြေထောက်ဒဏ်ရာရနိုင်ပေမယ့်သူ့ရဲ့ ဦး နှောက်ကဒီနေရာကိုအစားထိုးလို့မရဘူး။ သူသည်ပရိုတင်းကို ၀ တ်ဆင်လိမ့်မည်။ သို့သော်သူ၏ ဦး နှောက်သည် ဦး နှောက်ဒဏ်ရာအတွက်ဆေးကုသမှုလုံးဝမရှိပါ။ ဦး နှောက်ထိခိုက်မှုသည်ထာဝရဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏မသန်စွမ်းမှုကိုကုသရန်မဟာဗျူဟာများထည့်ဝင်နိုင်သော်လည်း HEAD ဒဏ်ရာကိုကုသရန်တစ်ခုတည်းသောထိရောက်သောချဉ်းကပ်မှု
တစ်စုံတစ် ဦး ကသူတို့၏စည်ခုံဥပဒေများသူတို့၏နည်းဗျူဟာများပေးဖို့မဟုတ်, သူတို့တစ်တွေလိုအပ်တယ်။ အမေ - တစ်စုံတစ်ယောက်ကမိုက်မဲမယ်ဆိုတာငါသိတဲ့အတွက် - ယာကုပ်ပဲမိုက်မဲရမယ်၊ ပြီးတော့ဒီလိုပြောတယ် -“ ငါ့ကိုဘယ်တော့မှဖြစ်မလာနိုင်ဘူး” တစ်ခုတည်းသော
ငါဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် သံခမောက်လုံးကောငျးမကွဘူး။ ပြောဖို့ကိုမုန်းတယ်။ သူတို့ကောငျးမကြည့်ကြဘူး။
အကယ်၍ သင်သည်သံခမောက်လုံးကိုမဝတ်ပါကသင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတစ် ဦး တည်းသာဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်မထိခိုက်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ရဲ့ဥပဒေပြုမှုအကြားဒေါ်လာ ၂၀၀၀၀ တန်စက်ဘီးတစ်စီးကြောင့်ကောင်းတာဖြစ်ပေမယ့်လူတွေအိုင်တီကိုစီးနေတဲ့ဘယ်သူ့ကိုမှမမြင်နိုင်ဘူးလား။ အားလုံးရွေးချယ်မှုလွတ်လပ်ခွင့်။
အားလုံးထဲမှာသြစတြေးလျပြည်နယ်နှင့်နယ်မြေများ (မြောက်ပိုင်းနယ်မြေများမှအပ) သည်လူများအား ၀ တ်ဆင်ရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်သံခမောက်ဘယ်အချိန်မှာဘယ်နေရာမှာမဆိုသူတို့စက်ဘီးစီး။သြစတြေးလျအပြည့်အဝပြဌာန်းမဖြစ်မနေနှင့်အတူကမ္ဘာပေါ်မှာနှစ်ခုသာနိုင်ငံများမှတစ်ခုဖြစ်သည်သံခမောက်ဥပဒေ။
သံခမောက်တိကျသော ဦး ခေါင်းဒဏ်ရာများမှကာကွယ်နိုင်သည်၊ သို့သော်သူတို့သည် ပို၍ လုံခြုံသောလမ်းများနှင့် ပို၍ သတိရသောယာဉ်မောင်းများကိုအစားထိုးနိုင်မည်မဟုတ်။ သင်အစဉ်အဆက်တစ်စီးစီးလျှင်ဆိုင်ကယ်မပါဘဲသံခမောက်သင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်သံခမောက်ပျင်းတယ် အန္တရာယ်တွေနဲ့အန္တရာယ်တွေကိုဘယ်တော့မှမမောင်းသင့်တာကိုသူတို့ကအသေးစိတ်ပြောလိမ့်မယ်။
ဤပြန်လည်သုံးသပ်ချက်တွင်ကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်ထားသောဖြစ်ရပ်ထိန်းချုပ်မှုလေ့လာချက် (၅) ခုပါဝင်ပြီးတွေ့ရှိခဲ့သည်ခမောက်စက်ဘီးစီးသူအားလုံး၏အသက်အရွယ်အတွက် ဦး ခေါင်း၊ ဦး နှောက်နှင့်ပြင်းထန်သော ဦး နှောက်ဒဏ်ရာအန္တရာယ်ကို ၆၃၈၈% လျှော့ချသည်။ ပြန်လည်သုံးသပ်စာရေးဆရာများကြောင်းကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်စက်ဘီးခမောက်ဦး ခေါင်းဒဏ်ရာကိုကာကွယ်ရန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းများဖြစ်သည်။
TO သို့အနီရောင်အသွားအလာအလင်းလမ်းအသုံးပြုသူများအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည်။စက်ဘီးစီးအဆိုပါလျှင်မှတ်တိုင်လိုင်းမကူးရမီးအိမ်ဖြစ်ကြသည်ပိုက်ကွန်။ သီးခြားမှတ်တိုင်လိုင်းကိုသုံးပါစက်ဘီးစီးလက်တွေ့ကျတဲ့အခါ။
များအတွက်အများဆုံးမကြာခဏအကြောင်းပြချက်မဟုတ်ဘူးကိုသုံးခြင်းသံခမောက်၏လေးလံသောအလေးချိန်ရှိကြ၏သံခမောက်(၇၇%) အပူ၊ ၇၁.၄%၊ လည်ပင်းတွင်နာကျင်မှု (၆၉.၄%)၊ အသက်ရှူကျပ်ခြင်း (၆၇.၇%)၊ ခေါင်းနှင့်လည်ပင်းလှုပ်ရှားမှုအကန့်အသတ်ရှိမှု (၅၉.၆%) နှင့်အတူတကွရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမသက်မသာဖြစ်ခြင်း ၏မဝတ်ဘူးရန်သံခမောက်စဉ်အတွင်းမော်တော်ဆိုင်ကယ်...
ရဲ ၅၀၀ ဝန်းကျင်ထုတ်ပေးတယ်ရည်ရွယ်ချက်များများအတွက်စက်ဘီးစီးရန်လစဉ်လတိုင်းသံခမောက်လုံးမဝတ်ရတစ် ဦး ချင်းစီတစ်ခုတန်ဖိုးမှာဒေါ်လာ ၃၄၄ ဖြစ်ပြီး၊ စက်ဘီးအားလုံး၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်ရည်ရွယ်ချက်များ2014 ကတည်းကထုတ်ပေး။25 2020 ။
ကွင်းစလန်၌စက်ဘီး ဦး ထုပ်မ ၀ တ်ခြင်းအတွက်ဒဏ်ငွေကားအဘယ်နည်း။
စက်ဘီးစီးသမားဖမ်းမိမဝတ်ဘူးရန်သံခမောက်ဖြစ်နိုင်သည်ဒဏ်ငွေအောက်မှာ $ 126ကွင်းစလန်ဥပဒေ။
အကယ်၍ သင်စက်ဘီးစီးမယ်ဆိုရင်သံခမောက်လုံးကိုသင်ဝတ်ဆင်ရမယ်။ လက်ရှိတွင်ကိုလံဘီယာခရိုင်အပါအ ၀ င်ပြည်နယ် ၂၂ ခုတွင်အရွယ်မရောက်သေးသူများမှမဖြစ်မနေသံခမောက်ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးဥပဒေများရှိသည်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိအဆိုပြုထားသောဥပဒေသည်အရွယ်ရောက်စက်ဘီးစီးသူများအတွက်သံခမောက်လုံးကိုပထမဆုံးပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်လိမ့်မည်။
သင့်ရဲ့အာမခံကိုသူတို့ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်သလဲ။ ပြည်နယ်အများစုတွင်၊ သင်အနည်းဆုံး ၂၁ နှစ်ရှိသည်အထိ၊ သံခမောက်မရှိမော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးခြင်းကိုတရားဝင်သည်။ ယူအက်စ်ရှိပြည်နယ် (၁၉) ခုတွင်သာလျှင်မြင်းစီးသူရဲများအားလုံးကိုခမောက်များတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သော universal motorcycle helmet laws ရှိသည်။
ဦး ထုပ်ဆောင်းထားခြင်းကသင့်ကိုကုန်ကျနိုင်သည် ဒါဟာရုံဒဏ်ငွေအကြောင်းကိုမဟုတ်ပါဘူး။ အကယ်၍ သင်သည်ကယ်လီဖိုးနီးယားဥပဒေကိုချိုးဖောက်ခြင်းအတွက်ကိုးကားချက်တစ်ခုကိုလက်ခံရရှိပါကသင်၏ပြည်နယ်သည်သင့်ဒဏ်ရာများအတွက်သင့်အားအပြစ်ရှိသည်ဟုတွေ့ရှိနိုင်သည်။ အကယ်၍ ထိခိုက်မှုကြောင့်သံခမောက်လုံးမရှိသောကြောင့်အာမခံတောင်းဆိုမှုများကိုတင်ပြသူအချို့သည်လျော်ကြေးအနည်းငယ်သို့မဟုတ်အားလုံးဆုံးရှုံးနိုင်သည်။